निवर्तमान (Nibartaman) ||: April 2016
सल्यान र रोल्पाको सीमानामा पर्ने निगालपानीको लेकमा फुलेका गुराँस । गुराँसको र्सवत सल्यानको कोसेली हो । गुराँसको सुन्दरताको बखान गरेर मात्र पुग्दैन । यसको भौतिक उपयोग पनि अति जरुरी छ । गुराँसको र्सवत उपयोगिताको एउटा राम्रो नमूना हो । अब हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पत्तिलाई उपयोग पनि गर्नुपर्छ । जबसम्म उपयोगलाई छाडिन्छ, जीवनमा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले स्रोत साधन छन् भनेर मात्र हुँदैन, सहि तरिकाले त्यसको संरक्षणसँगै प्रयोगलाई पनि जोड दिनु अति जरुरी हुन्छ ।
अब गुराँसलाई हर्ेर्ने मात्र होइन, यसलाई प्रयोग पनि गर्ने बेला आएको छ । त्यसो गर्न सके मनग्गे आम्दानी पनि हुने र समृद्धि पनि हासिल हुन सक्छ कि ?
-तस्बिरः मनिकर कार्की निवर्तमान)
मनिकर कार्की "निवर्तमान"
लिवाङबाट बाटो लाग्दा मध्यान्हको ठ्याक्कै बाह्र बजेको थियो । चैतको सुरुवात नै भएकोले होला शायद, बाह्र बजेको चर्को घाममा पनि धेरै गर्मी महशुस भएन । बरु मध्यान्हमा चल्ने शीतल पवनले घमाइलो दिनलाई थप मुग्ध बनाएको थियो । त्यसो त यो समय गाउँघरतिर आरु फुल्ने समय पनि हो, आरु फुल्ने समयको चञ्चलता नै बेग्लै हुन्छ । साँझ बिहान बादलुसँगै लुकामारी गर्ने र्सर्ूय अनि दिनको चर्को घाममा पनि मन्द गतिमा चल्ने शीतल प्राणवायुले वातावरण निकै मोहित तुल्याउँछ । अझ वनजंगलतिर सुनिने कोइलीको कुहुकुहु र चराचुरुंगीको चिर्बिराहटले वसन्त ऋतुलाई वैशालु बनाइदिएको हुन्छ । हो, मध्यान्हको चर्को घाममा पनि हामीलाई भने त्यस्तै राहत र शीतलताको अनुभूति भयो ।
लिवाङबाट ओरालो लाग्दा यस्तै रमाइलो र चञ्चलताको अनुभूतिसँगै थियो । हाम्रो गन्तब्य थियो, सल्यानको कपुरकोट । अबको भूगोल पर्ूण्ातया नयाँ थियो । नयाँ भूगोल भन्नेबित्तिकै मन त्यसै त्यसै चञ्चल हुन्छ । नयाँ परिवेश, नयाँ दृष्य अनि यात्राको नयाँ अध्याय । नयाँ ठाउँमा यात्रारत हुनुको मज्जा नै त्यही हो । लिवाङबाट ओरालो लागेको केही बेरमै कालोपत्रे सडक सकियो । लिवाङमै पाइएको जानकारी अनुसार अबको झण्डै ७० किलोमिटर यात्रा कच्ची बाटो हुनेथियो । कच्ची सडकमा मोटरसाइकलको यात्रा रोमाञ्चकारी त हुन्छ नै कतिपय अवस्थामा अलिक जोखिमयुक्त पनि हुन्छ । खासगरी यात्रारत रहँदा सवारी साधनमा केही गडबडी भयो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो दर्ूभाग्य भइदिन्छ ।
इतिहासको फुलबुट्टे कथाले मात्रै देश बन्छ र महोदय ?
लामो समयको अन्तरालमा लेखक–विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरसँग फेसबुकमा कुरा हुँदै थियो । कुराकानी गर्दैगर्दा इतिहासको प्रसंगमा गएर टुंगियो । उनले सामान्यतया मान्छेले आफ्नो इतिहास भुल्ने गरेको तथ्यतर्फ संकेत गर्दै यसो भने, ‘कोही इतिहास समातेर वर्तमानमा सार्थक बन्न चाहन्छन्, कोही इतिहासबाट छुटकारा पाएर वर्तमान नै सर्वस्व हो भन्छन् ।’
शायद यो संसारका श्रृष्टिमध्ये मानव समुदाय मात्रै यस्तो प्राणी हो, जसले इतिहास, वर्तमान र भविष्य बुझ्दछ । शायद अरु प्राणीमा त्यो स्तरको चेतना हुँदैन, र नै उनीहरुलाई इतिहासको बोझ पनि छैन र भविष्यको चिन्ता पनि । तर, मानव समुदायमा इतिहासको गर्व, वर्तमानको संघर्ष र भविष्यको सुन्दर सपना छ । त्यही भएर मानव समुदायलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर श्रृष्टि मानिन्छ ।